Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kokwelashwa Komdlavuza Wendlala Yendlala
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ukuhlolwa Okusha Komtholampilo Kokwelashwa Komdlavuza Wendlala Yendlala
I-Hinova Pharmaceuticals Inc., inkampani yesigaba somtholampilo ye-biopharmaceutical egxile ekuthuthukiseni izindlela zokwelapha ezinomdlavuza nezifo ze-metabolic ngobuchwepheshe obuhlosiwe bokuwohloka kwamaprotheni, imemezele ukuthi isiguli sokuqala esinomdlavuza wendlala yesinye we-metastatic castration-resistant Prostate (mCRPC) sikhishwe ngempumelelo esigabeni I. isilingo somtholampilo se-HP518, i-chimeric degrader ekhethwa kakhulu futhi etholakala ngomlomo eqondise i-androgen receptor (AR). Ucwaningo oluqhubekayo lwelebula evulekile lweSigaba I e-Australia luzohlola ukuphepha, i-pharmacokinetics, nomsebenzi wokulwa nesimila we-HP518 ezigulini ezine-mCRPC.
I-HP518 itholwe futhi yathuthukiswa inkundla yokutholwa kwezidakamizwa ezihlosiwe ka-Hinova zokucekela phansi amaprotheni. Inamandla okunqoba ukumelana nemithi yomdlavuza wendlala yesinye ngenxa yokuguqulwa okuthile kwe-AR.
I-Chimeric degraders ama-molecule amancane asebenza kabili akhuthaza ukuwohloka kwamaprotheni okuhlosiwe anamandla aphezulu kanye nokukhetha okuphezulu. Lobu buchwepheshe bunamandla okukhomba okuqondiwe okungadakwa futhi bunqobe inkinga yokumelana nezidakamizwa yemithi yendabuko yama-molecule amancane.
"Lesi yingqopha-mlando ebalulekile ekuqhubekeleni phambili kwemizamo yethu kusukela ekutholakaleni kwezidakamizwa kuya ocwaningweni lomtholampilo," kusho u-Yuanwei Chen, Ph.D., uMongameli kanye ne-CEO ye-Hinova. "Sijabule ngakho futhi sizinikele ekuletheni izindlela ezintsha zokwelapha ezigulini emhlabeni wonke!"
Ngenkundla yokutholwa kwezidakamizwa ezihlosiwe zokonakaliswa kwamaprotheni, i-Hinova ingakwazi ukuhlola umsebenzi wokuwohloka kwamaprotheni ngokushesha futhi ifeze ukuklama okuphumelelayo kanye nokwenza ngokugcwele okonakaliswa kwe-chimeric. Ngaphezu kwalokho, u-Hinova unolwazi olujulile ekulawuleni ukukhiqizwa kwamakhemikhali kwe-Chimeric degrader compounds.
Ulwazi Olusha Ngokuthi I-Crosstalk Phakathi Kwamangqamuzana E-pancreatic Ingaluqhuba Kanjani Uhlobo Lwesifo Sikashukela Olungavamile
I-ATM 2022: Umgudu wesikhathi eside wohambo lwaseMpumalanga Ephakathi...
I-WTN Ifuna Amanye Amalungu e-WTTC Athathe Isinyathelo Esinye Esengeziwe...
Ukuthengiswa kweMakethe ye-Potassium Sulphate ukufinyelela esilinganisweni...
Shayela Imingcele Evulekile: I-Polar Bear kanye ne-Beluga Whale...
Izikhumulo zezindiza ezi-5 zase-US zikleliswe kwezingu-10 Eziphezulu Emhlabeni
Uxhaso lukahulumeni lokuvuselela ezokuvakasha zamazwe ngamazwe...
I-Thai Tourism ihlela ukukhansela i-Thailand Pass entsha...
I-Hotel Arts Barcelona Yembula Ihlobo nge-New Marina...
Izivakashi ezimbili zase-Europe ziboshwe e-Iran ngokudala...
I-Cirrhosis Management Market by Region, Industry...
Iningi Labesifazane Banenkinga Yokudla - Bavele...
I-Russian Aeroflot ikhishwe kumfelandawonye wezindiza ze-SkyTeam
I-TripAdvisor ihlukanisa i-Resident Covent Garden